Global Voices teny Malagasy » Tapaho Ny Fahanginana: Fanentanana Hamotsorana ireo Mpikatroky Ny Zon’Olombelona Any Am-ponja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Desambra 2014 9:33 GMT 1	 · Mpanoratra Advox Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Syria, Fanentanana, Fisamborana sy faneriterena, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Feo voarahona
Sary fanentanana avy amin'i Kalie Taylor sy Hugh D'Andrade.
Androany, andron'ny Zon'Olombelona, ampahatsiahivinay izao tontolo izao momba ireo namanay iza nandrava ny fahanginan'ny fangejana amin'ny fanehoana hevitra, fanontaniana, ary ny fieritreretana sahy mitsikera sy zavatra mivaingana amin'ny fomba hamahana ny olana atrehin'izy ireo.
Tsaroantsika androany i Alaa Abd El Fattah  sy Bassel Khartabil  (antsoina hoe Bassel Safadi), namana roa any am-ponja tsy amin'ny antony izay manohintohina ny hoavin'izy ireo amin'ny maha-mpihevitra zava-baovao sy malalaka azy ireo ao amin'ny tontolo Arabo. Nogadraina nanomboka volana Martsa 2011 tao Syria i Bassel, ary nogadraina imbetsaka tao Ejypta hatramin'ny fitondran'i Mubarak kosa i Alaa.
Manandrata feo miaraka aminay androany amin'ity fanentanana manerantany hoan'i Alaa, Bassel, sy ireo sisa maro izay nogadraina tsy amin'ny antony noho ny hafanam-pon'izy ireo.
Tohano ireo namantsika any am-ponja:
Soniavo ity fanambarana ity: Tsindrio eto raha hitondra ny fanohananao !
Zarao ao amin'ny habakao ity fanambarana ity
Tohano ao amin'ny Twitter sy Facebook amin'ny alalan'ny #FreeAlaa  sy #FreeBassel  i Alaa sy Bassel
Bassel “Safadi” Khartabil. Sary avy amin'i Joi Ito tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Momba An'i Bassel
Teraka sy lehibe tao Syria i Bassel, ary nanjary manam-pahaizana manokana momba ny fampivelarana rindrambaiko misokatra. Niara-namorona ny orinasam-pikarohana ifarimbonana Aiki Labs izy, ary tale teknika ao amin'ny Al-Aous, foibem-pikarohana sy famoahana manokana momba ny siansa arkeôlôjika sy ny zavakanto ao Syria. Mpitantana ny tetikasa sy tompon'andraikitra ao amin'ny Creative Commons [fr] ao Syria izy, ary nandray anjara tamin'ny Mozilla Firefox[fr] , Wikipedia[fr] , Openclipart[fr] , sy Fabricatorz ihany koa. Anisan'ireo asa farany nataony ny fanavaozana indray ny sary 3D [refy telo] ny tanàna fahiny Palmyre [fr] ao Syria.
Tamin'ny volana Novambra 2012, nosaloran'ny Foreign Policy  ho iray amin'ireo 100 mpihevitra mendrika indrindra manerantany i Bassel. Manam-pahaizana momba ny teknolojia informatika izay te hanampy hampandroso ny fireneny amin'ny alalan'ny fampidirana teknolojian'ny aterineto vaovao any amin'ny oniversite, orinasa sy ny vondrona firaisamonim-pirenena i Bassel. Manamarika ny andro faha-1000 nigadran'i Bassell androany, Andron'ny Zon'Olombelona.
Lahatsary misy ny mombamomba an'i Bassel Khartabil 
Mpandresy tamin'ny fifaninanana momba ny sivana 2013 
Fanambarana tao amin'ny Antenimiera Eoropeana: Fanagadrana an'i Bassel Safadi Khartabil 
Herintaona taty aoriana, Nahatsiaro an'ilay Bilgaogera syriana nogadraina Bassel Khartabil ny Fikambanana Electronic Frontier 
Habaka fanentanana ho FAMOTSORANA AN'I BASSEL 
Alaa sy Manal. Sary avy amin'i Lilian Wagdy tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Momba an'i Alaa
Ejypsiana mpikatroka politika, bilaogera ary mpiaro ny rindrambaiko misokatra i Alaa Abd El Fattah izay nandany ny ankamaroan'ny androny tany am-ponja tao anatin'izay telo taona lasa izay. Nogadraina voalohany tamin'ny taona 2006 tamin'ny fitondran'i Mubarak, nogadraina imbetsaka i Alaa tamin'ny taona 2011 noho ireo fiampangana tsy misy mifandraika amin'ny fikatrohany ela be sy mahasarika. Tamin'ny Desambra 2011, tsy nahita ny fahaterahan'ny zanany lahy Khaled izy raha mbola tany am-ponja .
Tamin'ny volana Jiona 2014, nahazo sazy an-tranomaizina  15 taona tsy nisy fijoroana teo amin'ny fitsarana izy—na dia tao ivelan'ny tokontanim-pitsarana aza tamin'izany fotoana izany.
Na dia navotsotra tao anatin'ny fotoana fohy noho ny fandoavana onitra aza izy tamin'ny volana Septambra, nosamborina  indray i Alaa tamin'ny 21 Oktobra. Nankalaza ny faha-33 taonany indray tao am-ponjan'i Torah ao Kairo izy tamin'ny 18 Novambra. Manan-jo hivoaka ny fonjany adiny iray isan'andro izy saingy matetika tsy mahazo mivoaka any an-tokontany. Tamin'ny 10 Desambra, nanomboka ny fitokonany tsy hihinan-kanina nandritra ny 38 izy.
Nahazo sazy an-tranomaizina 3 taona ny anabavin'i Alaa, Sanaa Seif,noho ny fanitsakitsahana ny lalàna henjana mifehy ny fihetsiketsehana ao Ejypta .
Fanangonantsonia nalefa any amin'ny Firenena Mikambana ho Famotsorana an'ilay bilaogera Ejyptiana any am-ponja Alaa Abdel Fattah 
Janoary 2014, Fanambaran'ny Firaisamonim-pirenena ho Famotsorana an'i Alaa 
Antsafa nataon'i Lina Attalah tamin'i Alaa 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/13/66314/
 Tsindrio eto raha hitondra ny fanohananao: https://docs.google.com/forms/d/1lNafJlR64CBfbR4AR6onV5uEEf_EaDbn58-OmoCPkMA/viewform
 Fabricatorz : http://en.wikipedia.org/wiki/Fabricatorz
 100 mpihevitra mendrika indrindra manerantany : http://foreignpolicy.com/2012/11/26/the-fp-top-100-global-thinkers/
 Lahatsary misy ny mombamomba an'i Bassel Khartabil: https://www.youtube.com/watch?v=iCryvkgBUfo
 Mpandresy tamin'ny fifaninanana momba ny sivana 2013: http://vimeo.com/62429707
 Fanagadrana an'i Bassel Safadi Khartabil: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-014046+0+DOC+XML+V0//EN
 Herintaona taty aoriana, Nahatsiaro an'ilay Bilgaogera syriana nogadraina Bassel Khartabil ny Fikambanana Electronic Frontier: https://www.eff.org/deeplinks/2013/03/one-year-later-eff-honors-jailed-syrian-blogger-bassel-khartabil
 Habaka fanentanana ho FAMOTSORANA AN'I BASSEL: http://freebassel.org/
 nahazo sazy an-tranomaizina: https://www.eff.org/deeplinks/2014/06/alaa-abd-el-fattah-sentenced-absentia-15-years-jail
 navotsotra : https://www.eff.org/deeplinks/2014/09/good-news-alaa-abd-el-fattah-freed-bail
 Nahazo sazy an-tranomaizina : http://www.buzzfeed.com/gavon/editor-of-oscar-nominated-documentary-the-square-sentenced-t
 Fanangonantsonia nalefa any amin'ny Firenena Mikambana ho Famotsorana an'ilay bilaogera Ejyptiana any am-ponja Alaa Abdel Fattah: https://fr.globalvoicesonline.org/2014/08/28/173880/
 Janoary 2014, Fanambaran'ny Firaisamonim-pirenena ho Famotsorana an'i Alaa: https://www.eff.org/deeplinks/2014/01/civil-society-egypt-release-alaa-abd-el-fattah-and-all-unjustly-detained-egypt
 Antsafa nataon'i Lina Attalah tamin'i Alaa: http://www.madamasr.com/sections/politics/between-prisons